Injinia Robotic: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọzụzụ a | Ngwaike efu
Injinia Robotic: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọzụzụ a
Isaac | 23/11/2021 09:41 | Emelitere ka 24/11/2021 17:04 | Robotics
La injinia robotic na-adịwanye mkpa, ka robots na AI na-elebawanye anya ọrụ ndị mmadụ na-emebu. Na mgbakwunye, ejuwokwa ụlọ obere robots iji nyere aka nye ndị mmadụ, dị ka ndị na-ehicha oghere, n'etiti ndị ọzọ. A na-emepụta robots iji mee ka ndị mmadụ nọ naanị ha ụlọ ọrụ, na-elekọta ụlọ ọgwụ, wdg.
Ya mere, ọ dị mkpa ka ị mara ịdọ aka ná ntị a nke ọma, ihe ọ na-ekpuchi ma nwee ike ịbịaru otu n'ime ya ọrụ kachasị achọ taa na n'ọdịnihu dị nso ...
1 Kedu ihe bụ injinia robotik?
1.1 Nkewa robot
1.2 Uru nke robots
2 Ojiji na ngwa nke injinia roboti
3 Ọdịiche na mechatronics
4 Akwụkwọ edemede ka ịmalite ịmụ gbasara isiokwu na ihe ndị a
Kedu ihe bụ injinia robotik?
La injinia robotic Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ na-agụnye injinia dị iche iche na sayensị kọmputa maka imepụta na iwu nke rọbọt. Ya bụ, ngwakọta nke ọzụzụ sitere na sayensị kọmputa maka mmemme sistemu, ọgụgụ isi, mmụta igwe, mmụta miri emi, njikwa, physics, maka igwe maka akụkụ robot na-akpụ akpụ na ngwa elektrọn maka njikwa ngwa ndị a.
Owuwu nke ndị a robots nwere uche, ma bụrụ na ha na-arụ ọrụ ndị mmadụ chọrọ, na-edochi nke a na ugboro ugboro, mgbagwoju anya, ọrụ dị ize ndụ, akpaaka ụlọ ọrụ, wdg. Ọbụna ọgbọ ọhụrụ na-agabiga nke ahụ, ma nwee ike dochie anya ụmụ mmadụ na mpaghara ụfọdụ, na-arụ ọrụ, soro anụ ụlọ na ndị mmadụ na-emekọ ihe, wdg.
E nwere ọtụtụ ọgbọ nke robots, ya bụ, na-awụli elu na mmepe nke akara n'ihu na mgbe emechara na injinia rọbọt:
Ọgbọ: rọbọtị ndị bụ isi nke e bu n'obi mee ihe. Ha na-arụ ọrụ site na usoro ejiri usoro edozi ma ọ bụ agbanwe agbanwe.
Ọgbọ: ha dị ntakịrị karịa, ebe ọ bụ na ha gụnyere usoro mmụta. Agbanyeghị, ha ka dabere na mmadụ.
Ọgbọ: A na-enye iwu njikwa nke robot site na kọmpụta, ngwanro nke ga-ekpebi iwu ndị mmadụ mere.
Ọgbọ: ha bụ robots nwere ọgụgụ isi, nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sensọ na transducers maka ozi bidirectional nke gburugburu ebe obibi na kọmputa na-achịkwa ozugbo. Na mgbakwunye, ha nwere ike ọbụna ịtụ anya mkpa, na-enwere onwe ha.
Ọgbọ rọbọtụ n'ọdịnihu na-ekwu na ha ka dị ọzọ nnwere onwe na ọgụgụ isi, na ọbụna akụkụ ọhụrụ nke ngwa a chọtara, dị ka ndị agha ...
Uru nke robots
Robots nwere ike ime ọtụtụ omume ụmụ mmadụ mere ruo mgbe ha rutere, ma ha na-eme ya n'enweghị ihe egwu, na nke ọzọ. ngwa ngwa na oru oma, si otú a na-azọpụta ego. Na mgbakwunye, ha na-ebumnobi karịa mgbe a na-enyocha ọnọdụ karịa mmadụ, ha na-enwekwa oke nkenke maka ọrụ ụfọdụ na-agbagwoju anya maka mmadụ.
Enwere ike ịrụzi roboti ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma, na-etinyeghị ndụ mmadụ n'ihe ize ndụ, enwere ike ibugharị ya ngwa ngwa, gbanwee ya, wdg. Otutu uru nke nke nta nke nta ka ha na-arụkwu ọrụ. Ihe yiri mgbanwe mmepụta ihe na iji igwe.
Ojiji na ngwa nke injinia roboti
Na usoro nke ngwa Site na injinia rọbọt, ma ọ bụ karịa, ruo na rọbọt, nsonaazụ ọzụzụ a bụ:
Nhọrọ na nlekọta site na ọhụụ artificial.
Ntugharị nke ihe dị arọ.
Ịrụ ọrụ na ahịrị mgbakọ (skru, welding, drilling, cutting, ...).
Ọdịiche na mechatronics
Ụfọdụ ndị mmadụ na-agbagwoju anya na injinịa rọbọt Mechatronic, ma ha abụghị otu, ọ bụ ezie na ha na-ekerịta ihe ụfọdụ ma nwee ike mechaa na-eji otu ihe ahụ eme ihe, na-arụ ọrụ ígwè ọrụ. N'ihe gbasara mechatronics, ọ bụ ngalaba injinia dị iche iche nke jikọtara igwe, eletrọnịkị, sayensị kọmputa na injinia njikwa.
Ebumnuche nke alaka a abụghị naanị imepụta robots, kama imepụta, nwalee na rụpụta igwe dị iche iche (ịbanye MCU, sensọ, moto, gears, ...). Dị ka ọmụmaatụ, ngwa kacha ewu ewu bụ:
Ịmepụta ngwaahịa smart.
Ya bụ, ọ ga-enwe ngwa na mpaghara ndị dị ka ụlọ ọrụ, Ngwuputa ihe, ụlọ ọrụ ọgwụ, ngalaba ụgbọ ala, wdg.
Akwụkwọ edemede ka ịmalite ịmụ gbasara isiokwu na ihe ndị a
Iji nwee ike idekọ onwe gị wee malite ịrụ ọrụ injinia rọbọt gị, ị nwere ike iji ndị a akwụkwọ ndị a tụrụ aro:
Mechatronics: Usoro, usoro na usoro
Mobile Robotics. Ụkpụrụ, Ụdị na Ngwa: Kinematics, Filter Particle, Artificial Intelligence, Kinect, Mechatronics, Mobile Robotics
Robotics na Basic Home Automation na Arduino
Okwu mmalite nke rọbọt
ELEGOO UNO R3 ngwa robot
OSOYOO Robot ụgbọ ala
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Robotics » Injinia Robotic: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọzụzụ a
Edemede a ọ̀ dabara n'ụkpụrụ nchịkọta akụkọ gị? Ihe na-ezighi ezi na omimi na-emighị emi, mana karịa ezighi ezi.
M na-agba gị ume ka ị gụgharịa amụma nchịkọta akụkọ gị wee lelee akụkọ ahụ anya nke ọma.
Ọ bụ akụkọ iji kọwaa ihe ọ bụ, ọ bụghị ịbanye n'ime isiokwu sara mbara nke ukwuu nke na isiokwu agaghị ezuru. Anyị nwekwara akụkọ ndị ọzọ na robotics nke ihe ndị ọzọ siri ike ebe ihe na-emewanyewanye.
Google Colab ma ọ bụ Google Colaboratory: kedu ihe ọ bụ
GND: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mkpọghe okwu ndị a